युगसम्बाद साप्ताहिक - गम्भीर रोगका औषधिको मूल्यमा मनोमानी
Thursday, 01.23.2020, 09:47pm (GMT+5.5) Home Contact
गम्भीर रोगका औषधिको मूल्यमा मनोमानी
काठमाडौं । मुलुकमा स्वास्थ्यसेवा क्षेत्रको विकास जति भए पनि उपचार उति महंगो हुँदै गएको छ । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि भन्दै डा. गोविन्द केसीले १४ पटकसम्म अनसन गरिसक्दा पनि यसमा तात्विक सुधार आएको छैन । चिकित्सा शिक्षा र क्षेत्रमा सामान्य परिवर्तन देखिए पनि यसले गरीबलाई अझै सहज उपचार गर्नसक्ने अवस्था सिर्जित भएको छैन ।
चिकित्सा सेवाको नाममा व्यापार फस्टाइरहेको अहिलेको समयमा औषधिको मूल्यले अरु जटिल बनाएको छ । सामान्य रोगका औषधिको मूल्यले खासै फरक नपारे पनि एक रुपैयाँ पर्नेलाई १० रुपैयाँ समेत लिने गरेका छन् । अर्कोतिर गम्भीर प्रकृतिका रोगका औषधिहरु त दुई हजार प्रतिशत बढी लिनेन गरेको पाइन्छ ।
विशेष गरी मुटु र क्यान्सर रोगका औषधिहरुमा अत्यधिक मूल्य राखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालै गरेको अनुगमनका क्रममा क्यान्सरका कतिपय औषधि लागत मूल्यभन्दा २००० प्रतिशत बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेको भेटिएको हो ।
नेपालमा बर्षेनि १५ देखि २० हजार जना क्यान्सरका नयाँ बिरामी थपिदैंगएको आँकलन छ । रोगी थपिंदै जाने, तर उपचार महंगो हुँदै जाँदा धेरैले उपचार नै गराउन नपाई मृत्युको मुखमा पर्नुपरेको छ । मुटु रोगको उपचार सहज बनाउन सरकारले २५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । तर, क्यान्सरको उपचार भने अत्यन्तै महंगो बनिरहको छ ।
हुन त नेपालमा विकसित देशको तुलनामा क्यान्सरको पहिचान र उपचार कम खर्चिलो हुने बताइए पनि औषधिको विक्रीमा मनोमानी भएका कारण सर्वसाधारणले खर्च थेग्नै नसक्ने गरी अकासिएको हो । परीक्षणका लागि १० देखि १५ हजार रुपैयाँ र उपचारका लागि सरदर १ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने सरकारको अध्ययन रहे पनि निजी क्षेत्रका अस्पताल भने उक्त रकम पर्याप्त नहुने बताउँछन् । विभिन्न जटिल प्रकृतिका रोग लागेका विपन्न वर्गको उपचारका लागि वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको बताउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसको ठूलो हिस्सा क्यान्सर रोगीको उपचारमा खर्च भइरहेको जनाएको छ ।
मन्त्रालय मातहतको एक अध्ययन समितिका अनुसार क्यान्सरको परीक्षण र पहिचान, शल्यक्रिया, किमोथेरापी वा रेडियोथेरापी गर्न र औषधि खरिद समेत गरी झण्डै एक लाख रुपैयाँसम्ममा उपचार गर्न सकिन्छ ।
अनियन्त्रित औषधि बजारका कारणले पनि क्यान्सरको उपचार अत्यधिक महँगो बनेको बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीकृष्ण गिरीले कुनैकुनै क्यान्सरका औषधिको मूल्य त लागतको तुलनामा दुई हजार प्रतिशतभन्दा बढी लिएको पाइएको बताउनुभयो । तर, उक्त भनाइ तथ्यसंगत नभएको औषधि उत्पादक तथा विक्रेताहरु बताउँछन् । क्यान्सर लगायतको उपचारका लागि उत्पादन हुने औषधिको कच्चा पदार्थको मूल्यसँगै उत्पादन र परीक्षणको मूल्य नजोडिएकोले पनि केही महँगो देखिने उनीहरुको भनाई छ ।
औषधिका अतिरिक्त उपचारका क्रममा हुने अन्य परीक्षणमा समेत मनोमानी रहेको अधिकारीहरुको भनाइ छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका अस्पताल बाहेक अन्य निजी अस्पतालहरुमा क्यान्सर रोगीको उपचारमा सरदर तीन देखि पाँच लाख वा सोभन्दा बढी खर्च हुने बताइन्छ । तर शल्यक्रियाको तुलनामा किमोथेरापी र रेडियोथेरापीमा खर्चको ठूलो हिस्सा सकिने भएका कारण पनि उपचार महँगो हुन पुगेको नेपाल क्यान्सर हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टरका प्रमुख एवम् क्यान्सर विशेषज्ञ डा. सुदिप श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार अहिलेको सम्पूर्ण क्यान्सर उपचार खर्च सर्वसाधारणका लागि ज्यादै महँगो छ । आफ्नै खर्चमा उपचार खर्च धान्न १०० जना बिरामी मध्ये १०–२० जनालाई पनि मुश्किल पर्छ ।